Ahoana ny fomba hanamboarana ny lesoka amin'ny playback YouTube? - Ahoana No
Ahoana ny fomba hanamboarana ny lesoka amin'ny playback YouTube?
YouTube no tranokala iray malaza malaza isan'andro. Hatramin'izao, io dia iray amin'ireo fantsom-piderana malaza indrindra eo amin'ireo mpampiasa. Na dia tsy lavorary loatra aza ny fahaizan'ny playback YouTube araka ny nantenaina azy.Betsaka ny olona no nimonomonona momba ny endri-playback raha mampiasa youtube amin'ny finday sy tranonkala. Mampiditra ara-bakiteny ny zavatra niainan'ireo olona nanangana vola tamin'ny mpanjifa premium YouTube.
Betsaka ny antony azo raisina ao ambadiky ny lesoka amin'ny playback. Mety misy ifandraisany amin'ny kaonty Google anao., Browser Cache, na fampiharana buggy ao amin'ny rafitranao.Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ireo fomba 10 ambony ahafahana mamaha ny olana amin'ny playback YouTube izahay. Noho izany, mandehana amin'ireto dingana ireto ary mankafiza fatratra ny YouTube.
Raha mpianatra ianao dia afaka manao izany Mangataha fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Premium YouTube .
Amboary ny lesoka amin'ny playback YouTube - ny fomba mety rehetra
1. Manakatona sy mamoha ny takelaka Browser
Voalaza fa ny fanidiana sy ny fanokafana ny vakizoro YouTube dia miasa amin'ny dingana manaraka. Izy io dia mora araka ny feony. Ny hany zavatra tsy maintsy ataonao dia ny mivoaka avy ao amin'ny kiheba YouTube vao haingana miaraka amin'ireo bokotra hitsin-dàlana izay Ctrl / Command + W ary hanokatra indray ny kiheba dia ampiasao ny bokotra hitsin-dàlana Ctrl + Shift + T ho an'ny varavarankely.
Raha mpampiasa Mac ianao dia ampiasao ny bokotra hitsin-dàlana Command + Shift + T.Raha milalao YouTube amin'ny finday avo lenta ianao dia miverena fotsiny amin'ny efijery an-trano, esory ny fampiharana rehetra amin'ny multitasking ary avereno indray amin'ny alàlan'ny fikororohana. Topazo maso amin'ny YouTube raha mandeha na tsia io fikafika io.
2. Mivoaha ary midira amin'i Google
Ny zavatra iray azonao atao dia ny mandeha amin'ny tranokalan'ny YouTube aloha ary tsindrio ny sarin'ny mombamomba anao eo amin'ny zorony ambony havanana ary avy eo soraty ny kaonty Google anao vao tsy ela.
Rehefa afaka fotoana vitsivitsy, dia midira indray amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alalana google ihany ary avy eo mandefa horonantsary YouTube
3. Avereno ny router
Ny router dia boaty plastika tsotra fotsiny toy ny solosaina kely izay ampidirina CPU, fahatsiarovana ary fitehirizana eo an-toerana izay miasa ao amin'ny rafitra fiasa. Ka, toy ny ataonao amin'ny solosainao sy ny finday avo lenta azonao atao ihany koa ny manavao ny router anao hamaha ireo olanao rehetra.
Ekena fa tokony hiandry farafahakeliny 10 seg ianao aorian'ny famonoana ny router ary hamerenana amin'ny laoniny fa lany tanteraka ilay capacitor.Aorian'ny famerenanao ny router dia ampifandraiso ny YouTube mba hahitana vokatra lehibe.
4. Vaovao farany ny mikirao praogramanao Router
Araka ny fanambaràn'ny mpampiasa maro dia azonao atao ny manandrana tetika iray ahafahanao manavao ny firmware misy anao izay mety mandeha. Noho izany, ity dingana ity dia mendrika aleha.
Raha mila antsipiriany bebe kokoa momba ny fanavaozana ny firmware router ianao sy ny fomba fanavaozana azy dia azonao atao ny manamarina ny maodely modem miaraka amin'ny torolàlana amin'ny antsipiriany avy amin'ny tranokala mpivarotra router.
5. Clear Cookies sy Cache
Zava-dehibe hatrany ny fanesorana ireo rakitra tsy maharitra sy tsy ilaina amin'ny fitaovana ampiasainao. Manampy amin'ny serivisy mivantana ny mandeha tsy tapaka.
Mila hamafana ny cache rehetra, ny tantaran'ny cookie ary koa ny fisie antontam-potoana tsy maharitra Internet avy amin'ny tranokalan'ny fitaovanao. Raha tsy hiasa ny YouTubeo dia mandehana any amin'ny ambaratonga hafa hoe Brower.
YouTube dia vokatra Google amin'ny farany ka raha manandrana mihazakazaka YouTube amin'ny tranokala Google Chrome ianao dia handeha amin'ny fomba tsara indrindra. Ohatra, noheverina fa ny YouTube dia hiasa lavorary amin'ny Opera, Firefox, Edge, na Safari fa Google kosa no iasan'ny YouTube tsy misy sakantsakana satria Google manana fironana hanaparitaka azy io ho mpampiely mpifaninana amin'ny fandefasana tsy mety. Famerenana amin'ny YouTube.
Taloha, betsaka ny fiampangana momba ny google noho ny fanovany ny tranokalany ho toy ny browser tsy chromium tapaka fa ny google chrome kosa dia manamafy ny olan'ny playback YouTube.
7. Atsaharo ny fanitarana Adblock
Amin'izao fotoana izao dia nisy lesoka tamin'ny playback YouTube izay noforonin'ny fanitarana Chrome malaza an'ny AdBlock ho an'ny Microsoft Edge Brave ary na dia ho an'ny mpitety Chrome aza. Taorian'ny fizahana ny zava-niseho iray manontolo dia nanome vaovao voamarina i Microsoft fa nitranga izany noho ny fifanandrinana teo amin'ny AdBlock Plus Browser extension sy ny Microsoft edge izay nisy fiatraikany tamin'ny fandefasana horonantsary YouTube.
Tsara kokoa ny misoroka ny fanitarana chromium toy izany mba hamahana ny olana.
8. Vaovao farany Youtube App
Mety misy ifandraisany amin'ny finday avo lenta io. Ny lesoka dia mety vokatry ny sarety izay navoakan'i Google. Raha mametraka ny findainao amin'ny fanavaozana mandeha ho azy ny fampiharana ianao dia havaozina ihany koa ny YouTube isaky ny mangataka fanavaozana izy.
Fa amin'ity indray mitoraka ity dia tsy miangatra ny google ary hamaha haingana kokoa ny olana.Mila mankany amin'ny magazay google play fotsiny ianao ary mahazo ny kinova farany an'ny fampiharana YouTube.
9. Amboary ny kalitaon'ny horonan-tsary
Azonao atao ny mankafy ny vahaolana 4k ao amin'ny YouTube anao amin'ny horonan-tsarimihetsika. Azonao atao ihany koa ny mametraka azy amin'ny auto hanitsiana ny horonantsary mikoriana araky ny fisian'ny fifandraisana internet. Raha apetrakao irery ny famahana ny horonan-tsary ary tsy dia manana fantsom-pifandraisana Internet ho an'io horonantsary mivantana io ianao dia hampiseho hadisoana amin'ny playback amin'ny fotoana anaovana azy.Soso-kevitra ny hampihena ny famahana ny filalaovana horonantsary ary avy eo manandrana manamboatra ilay olana.
10. Zahao ireo Servers Google
Ny antony lehibe aorinan'ny lesoka amin'ny playback YouTube dia ny habibiana ataon'ny mpizara google. Raha te hahalala bebe kokoa dia mandehana any amin'ny detector ambany ary zahao ireo olana mitovy. Raha io no olana lehibe indrindra dia tokony hiandry fotoana fohy ianao, mandra-pandamin'i Google ny lesoka rehetra.
Youtube dia nanjary iray amin'ireo serivisy lehibe indrindra ho an'ny olona tsirairay. Ny olan'ny playback amin'ny youtube dia mety amin'ny alàlan'ny loharano na avy amin'ny Internet na finday. Ny vahaolana dia efa noresahina tetsy ambony momba ny olana rehetra mifandraika amin'ny playback youtube. Andramo ny dingana rehetra ary ampahafantaro anay hoe inona ny olan'ny lesoka tamin'ny playback youtube sy ny fepetra noraisinao hamahana azy.
Statistika sy zava-misy Youtube (2020)
mandra-pahoviana no hamerina ny lalao amin'ny etona
mijery sarimihetsika hollywood amin'ny Internet maimaim-poana
iray volana maimaim-poana amazon prime
google.com/chromecast/setup ho an'ny solosaina finday
vehivavy 10 malaza indrindra
sarimihetsika amin'ny fisintomana maimaimpoana amin'ny internet